I-China ehlanganisiweyo ye-Decoiler Straightener, Umdibanisi we-Auto Decoiler oDityanisiweyo, Umdibanisi oDibeneyo we-Decoiler Straightener Umvelisi kunye noMboneleli
Inkcazo:Iikhoyili zee-Reels kunye nabaLungelelanisi,Umdibanisi we-Auto Decoiler ohlanganisiweyo,Umdibanisi wesixhasi sokudibanisa esiDityanisiweyo,Ukudityaniswa kwe-Uncoiler Straightener,I-Sheets Uncoiler Straightener,Uhlobo lweCradle Decoiler Cum Straightener
Home > Imveliso > I-Decoiler Straightener
Iintlobo zeMveliso ze- I-Decoiler Straightener , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Iikhoyili zee-Reels kunye nabaLungelelanisi , Umdibanisi we-Auto Decoiler ohlanganisiweyo ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umatshini oDibeneyo we-Decoiler oDibeneyo Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokudibanisa ngqo isixhobo se-Combo Qhagamshelana Ngoku
I-Coil Reel Decoiler Straightener Qhagamshelana Ngoku
I-Metal Sheet Decoiler Straightener Qhagamshelana Ngoku
Umatshini weToquitor Decoiler oLungisiweyo Qhagamshelana Ngoku
Umatshini we-decoiler straightener ukwindawo emfutshane uyilo lwenzelwe ukukhawulelana neemfuno zabathengi abanomda. Kububulumko kwaye kulula ukuhamba nokuyifaka.
Ukudityaniswa kwe-Decoiler Straightener Assembly Ngokudibeneyo - 2 kwi-1, Kungasigcina ngokukuko indawo yokuFakelwa, ukunciphisa icandelo loguqulelo lwezinto ezichanekileyo kwinkqubo yokulungelelanisa, emva koko kunokunyusa ukukhula komsebenzi womatshini.
Ikhabhathi yolawulo lweemoto yezinto eziDityanisiweyo zeDoilerener ezizimeleyo zizimeleyo, zikwasebenzisa nesiguquli sazo esiguquliweyo, oko kuthetha ukuba kungathatha ngokukhuselekileyo ukukhusela umatshini ukuqinisekisa ukuba akusayi kugqwetha xa kuthathelwa amanye amandla angaphandle.
Inkqubo yokuqhuba yomatshini othe tye kukudityaniswa kwendalo kunye nokudluliselwa kwegiya, okunokuthintela ngokufanelekileyo ukonakaliswa kwezinto ezibonakalayo ekujikeleziseni kwamavili ahamba nje.
Ivili elithe nkqo linesalathiso sokudayela, linokufumana amanqanaba omgangatho ngokukhawuleza. Yomeleza ukuqina kwe-roll ngokuqiniswa kwevili lokucinezela elibuyile, emva koko yenze ngqo indlela yokujonga.
Ubomi benkonzo yomatshini buya kuba bude ngokudibanisa inkqubo yokuthambisa.OEM yamkelwe, inokutshintsha umthwalo we-rack, iiparameter zokulungisa kwaye unakho ngokwemfuno yokwenza amandla okanye uxinzelelo lweengalo ezingafakwanga mandla zombane, njl.
Iikhoyili zee-Reels kunye nabaLungelelanisi Umdibanisi we-Auto Decoiler ohlanganisiweyo Umdibanisi wesixhasi sokudibanisa esiDityanisiweyo Ukudityaniswa kwe-Uncoiler Straightener I-Sheets Uncoiler Straightener Uhlobo lweCradle Decoiler Cum Straightener IiCoil feeders kunye nabaLungelelanisi Ukudibanisa i-Coil Reels kunye nabaLungelelanisi